Outlook Password ကို Recovery ကို Tool ကို။ PST Password ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းဆော့ဝဲ။
DataNumen Outlook Password Recovery သည် encrypted Outlook PST ဖိုင်များမှစကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စာဝှက်ထားတဲ့ PST ဖိုင်ရဲ့စကားဝှက်ကိုသင်မေ့သွားတယ်ဆိုရင်၊ ဒီကိရိယာနဲ့စကားဝှက်ကိုအလွယ်တကူပြန်ရယူနိုင်ပြီး PST ဖိုင်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်တယ်။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen Outlook Password Recovery?
ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ ၅ နာရီခန့်အခမဲ့သို့မဟုတ်စျေးသိပ်မကြီးသော Outlook Password Recovery ကိုကမ်းလှမ်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် DataNumen perfectlyုံသော
ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ ၅ နာရီခန့်အခမဲ့သို့မဟုတ်စျေးသိပ်မကြီးသော Outlook Password Recovery ကိုကမ်းလှမ်းသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ ငါနောက်ဆုံးတော့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် DataNumen ငါ့တ ဦး တည်းအချိန်အသုံးပြုမှုလိုအပ်ချက်အတွက်perfectlyုံသောဥပဒေကြမ်း fit! အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ကျက်သရေနှင့်တူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါ့နာရီစိတ်ပျက်အားလျော့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင်၏ .pst စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်ကြိုးစားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်ယူရန်လိုအပ်ပါကသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမှတ်သားထားမည်
သင်ပေးသောမည်သည့်ဖြေရှင်းမှုမျိုးမဆို ၀ ယ်ရန်လိုအပ်ပါကသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို bookmark လုပ်ပါလိမ့်မည်။
မတ်လ 21st, 2020
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen Outlook Password Recovery v1.2
Microsoft Outlook 97 to 2019 နှင့် Office 365 စာဝှက်ထားသော PST ဖိုင်များအတွက် Outlook ကိုထောက်ပံ့ပါ။
စာဝှက်ထားတဲ့ PST ဖိုင်များအတွက်စကားဝှက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
Windows shell နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသဖြင့် Windows Explorer ၏အခြေအနေ (ညာခလုပ်) နှင့်စာဝှက်ထားသော PST ဖိုင်အတွက်စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen Outlook Password Recovery Encrypted Outlook PST Files များမှ Password များကိုပြန်လည်ရယူရန်
သင်၏ PST ဖိုင်ကိုစာဝှက်ပြီး ၄ င်း၏စကားဝှက်ကိုမေ့သွားသည့်အခါသင်အသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen Outlook Password Recovery PST ဖိုင်ကိုစစ်ဆေးပြီးစကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်။
မှတ်စု: နှင့် encrypted Outlook PST ဖိုင်မှစကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူမီ DataNumen Outlook Password Recoveryကျေးဇူးပြုပြီး PST ဖိုင်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သောအခြားအပလီကေးရှင်းများကိုပိတ်ပါ။
စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက် encrypted Outlook PST ဖိုင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
PST ဖိုင်အမည်ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကိုနှိပ်ပါ ဖိုင်ကို browse နှင့် select လုပ်ပါရန် button ကို။ သင်တို့သည်လည်းကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မည် ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိစာဝှက်ထားတဲ့ PST ဖိုင်ကိုရှာဖွေရန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
အကိုကလစ်နှိပ်ပါ ခလုတ်နှင့် DataNumen Outlook Password Recovery အလိုလိုtart encrypted PST ဖိုင်အတွက်စကားဝှက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးပြန်ဆယ်ယူပါ။ တိုးတက်မှုဘား
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အပြီးတွင် encrypted PST ဖိုင်ရှိစကားဝှက်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ရယူနိုင်ပါက၊ အောက်ပါစာတိုလေးကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယခုသင်ကလစ်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ် clipboard သို့စကားဝှက်ကိုကူးယူရန်အတွက်၎င်းကို သုံး၍ Outlook ရှိ encrypted PST ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီးအသုံးပြုရန်၎င်းကိုအသုံးပြုပါ။
မှတ်စု: စကားဝှက်သည်သင်အသုံးပြုခဲ့သောစကားဝိုင်းနှင့်မတူနိုင်သော်လည်း၎င်းသည် encrypted PST ဖိုင်ကိုပြproblemsနာမရှိဘဲဖွင့်နိုင်သည်။
DataNumen Outlook Password Recovery ၁.၁ ကိုနို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်၊ ၂၀၀၃ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Password Recovery 1.1 ကိုဇွန်လ 17, 2020 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
DataNumen Outlook Password Recovery ၃.၁ ကို ၂၀၂၀၊ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Microsoft Outlook 97 မှ 2016 encrypted PST ဖိုင်များကိုထောက်ပံ့ပါ။